Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 62
Copyright, 1916, avy amin'ny HW PERCIVAL.
Inona no dikan'ny hoe "fanahy" ary ahoana no tokony hampiasana ny teny hoe fanahy?
Ampiasaina amin'ny fomba maro samihafa ilay teny. Ireo izay mampiasa izany dia manana fitsipika ho tsy fantatra mazava izay tian'izy ireo ho voatondro amin'izany. Ny ao an-tsainy rehetra dia ny hoe tsy zavatra ara-nofo izany; fa tsy zavatra ara-batana loatra izany. Fanampin'izany, dia ampiasaina tsy misy ilana azy io teny io, toy ny voajanahary izay misy ambaratonga maro amin'ny fampivoarana raharaha, ary tsy misy rafitra ekena hanendry ireo ambaratonga ireo. Ny Ejipsiana dia niresaka olona fito; Plato misy ratra telo; ny Kristiana dia miresaka ny fanahy ho zavatra hafa noho ny fanahy sy ny tena vatana. Miresaka karazana fanahy isan-karazany ny filozofia Hindu, saingy sarotra ny manapotsitra ireo fanambarana ireo amin'ny rafitra iray. Ny mpanoratra ny teôsôkrasia sasany dia mampiavaka ny fanahy telo: ny fanahy masina (buddhi), ny ain'ny olona (manas), ary ny kama, ny fanahin'ny biby. Ireo mpanoratra teôkôlôka dia tsy ekena izay tokony hampiharana ny teny hoe fanahy. Ka tsy misy mazava, tsy mitombina, afa-tsy izay voalazan'ny teny hoe fanahy ao anaty literatiora teôsôsika ny endrika tsy hita maso. Noho izany, tsy afaka milaza izay tiana holazaina amin'ny teny hoe fanahy.
Amin'ny fehezanteny fitenenana mahazatra toy ny hoe "tia am-po sy fanahy," "homeko ny aiko ho azy", "sokafy ny fanahiko ho azy", "fetin'ny fanahy sy fandehanan'ny saina," "maso mahamora," "biby manana fanahy, "" fanahin'ny maty, "manampy ny fisafotofotoana.
Toa ny zavatra iray iraisana dia ny hoe fanahy dia midika zavatra tsy hita sy tsy azo tsapain-tanana ary noho izany dia tsy zavatra eto an-tany, ary ny mpanoratra tsirairay dia mampiasa ny teny handrakofana ny ampahany na ampahany tsy hita maso araka izay ankasitrahany.
Ity manaraka ity dia omena fomba fijery momba ny fomba tokony hampiasana ny teny hoe fanahy.
Miseho ny famafazana mandritra ny vanim-potoana fitrandrahana, ny rivotra no miala aina. Raha mamelona ny tenany izy, dia mamelona azy toy ny maha-izy azy; izany hoe, sampana mahaleo tena, vondrona isam-batan’olona. Ny mpiorina tsirairay dia manana ny hery anaty, na dia tsy azo atao eo aza, ho lasa lehibe indrindra tsy ho takatry ny saina. Ny mpiorina tsirairay avy rehefa mifoka rivotra dia manana lafiny roa, izany hoe, miova ny lafiny iray, ny iray tsy miova. Ny lafiny miova dia endrika hita indrindra, ny tsy fiovana dia ny anjara tsy voatevana na singa. Ny ampahany naseho dia fanahy sy fanahy, hery ary raharaha.
Io maha-zava-dehibe ny fanahy sy ny fanahy io dia hita amin'ny andalana fanovana rehetra izay mahomby amin'ny vanim-potoana fisehoana.
Ny vondron'olona tsirairay dia mifangaro amin'ny vondron'olona tsirairay, nefa tsy manary ny maha izy azy, na dia tsy misy dikany aza izany tamin'ny voalohany.
Amin'ny fizarana ara-panahy hatrany amin'ny ambaratonga voalohany ara-panahy ka hatrany amin'ny ambaratonga manaraka, izany hoe, eo amin'ny lafiny ara-batana, dia mihena tsikelikely ny fahaizan'ny fanahy ary ny fitomboan'ny raharaha eo amin'ny ambaratonga mitovy. Ny teny hoe hery dia ampiasaina amin'ny toeran'ny fanahy, izay ifandraisany, fa ny raharaha kosa dia ampiasaina ho solon'ny fanahy.
Ny olona iray izay mampiasa ilay teny hoe tsy tokony hieritreritra hoe efa nilefitra tamin'ilay teny hoe fanahy izy ary fantany izay olana. Raha ny zava-misy, dia mety hoe tsy dia fantatrao hoe inona no olana satria fantany ny atao hoe fanahy. Fantany ny fisehoan'ny fahatsaran-toetra sy ny fananana manokana, fa raha ny tena zava-dehibe, ankoatra izany dia tsy fantany, farafaharatsiny raha tsy ny fahaizany mahatsiravina no fantsona ahafantarana azy.
Ny fanahy sy ny fanahy ary ny saina dia tsy tokony ampiasaina mifanolo toy ny sinonimia. Amin'izao tontolo izao dia misy baiko fito na kilasin'ny fanahy iray amin'ny planeta efatra. Ny baiko fito an'ny fanahy dia karazany roa: ny fanahy midina sy ny fanahy miakatra, ny tsy fandraisana andraikitra ary ny evolisiona. Ireo fanahy izay midina dia mahazo ampaherezina, mandrisika, aingam-panahy hiasa amin'ny fanahy. Ny fanahy miakatra dia, na raha tsy izany dia tokony hatsangana ary tarihin'ny saina. Ny efatra amin'ireo didy fito dia ny fanahy voajanahary, ny filaharana tsirairay izay manana mari-pahaizana maro eto amin'izao tontolo izao misy azy. Ny fanahy dia manery fanahy midina manaraka ny lalan'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny fanahy mazoto mankany amin'ny vatana mivaingana amin'ny alàlan'ny karazana aina sy ny endrika sy ny habaky ny natiora, mandra-pivoarany na ampidirina amin'ny endrika ara-batan'ny olombelona. Ny fanahin'ny fanahy na ny natiora dia manery ny fanahy ho avy hatrany raha toa ka mifandraika amin'izany, saingy tsy maintsy atao amin'ny alàlan'ny saina atsangana ho fanahy miakatra eo amin'ny lalan'ny evolisiona, amin'ny alàlan'ny ambaratonga isan-karazany isaky ny telo didy avy any an-tany ho any amin'ny tsy mety maty . Ny fanahy no fanehoana, fototra sy maha-fanahy ary fiainana ary fisainan'ny saina.
Mba hanavahana ireo didy fito mety hiantsoanay ny fanahy midina fanahy, fanahy-fanahy, fanahy-forona, firaisana ara-nofo; ary ny fiakarana miakatra dia ny fanahy - fanahy, ny ain'olombelona ary ny fanahy tsy mety maty. Mikasika ny fahaefatra, na filaharan'ny firaisana ara-nofo dia avela ho fantatra fa ny fanahy dia tsy firaisana ara-nofo fotsiny. Ny firaisana ara-nofo dia toetra mampiavaka ny raharaha ara-batana, izay ilain'ny fanahy rehetra alohan'ny hananganana azy ao amin'ny làlan'ny fivoarana. Ny baiko tsirairay avy dia mamorona fahatsapana vaovao eo amin'ny fanahy.
Ny baiko efatra an'ny fanahy voajanahary dia tsy ary tsy afaka ny ho lasa tsy maty raha tsy misy ny fanampian'ny saina. Miaina tahaka ny fofonaina na miaina na endrika izy ireo mandritra ny fotoana maharitra, ary avy eo dia misy ao amin'ny vatana vatana mandritra ny fotoana maharitra. Rehefa afaka kelikely dia nijanona izy ireo fa fanahy ao anaty vatana iray ary tsy maintsy mandalo vanim-potoana fanovana sendra ny fahafatesana. Avy eo amin'ny fiovana dia misy sampana vaovao, olom-baovao, izay hitohizan'ny fampianarana na ny traikefany amin'izany filaharana izany.
Rehefa mifandray amin'ny fanahy ny hanainga azy dia tsy afaka hahomby amin'ny voalohany ny saina. Mahery be ny saina noho ny saina ka tsy mety atsangana intsony. Ka maty io; very ny endriny; nefa avy amin'ny maha-izy azy lehibe izay tsy ho very dia mitaky endrika hafa ny saina. Mahomby ny saina hanainga ny fanahy avy amin'ny biby mankany amin'ny toetran'ny zanak'olombelona. Ao no mila misafidy ny fanahy raha te hiverina amin'ny biby izy na handeha any amin'ny tsy mety maty. Mahazo ny tsy mety maty izy rehefa mahalala ny maha izy azy irery sy tsy miankina amin'ny saina izay nanampy azy. Avy eo, ny fanahy dia lasa saina, ary ny saina izay nanangana ny fanahy ho tonga saina, dia mety handalo mihoatra ny tontolo efatra voatonona ho lasa tsy voafolaka, ary ho tonga iray miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra ny rehetra. Izay naseho an'izany fanahy izany ilay fanontana "Soul," Febroary, 1906, Vol. II, NY Teny.
Misy fanahy na fanahy mifandray amin'ny sombin-javatra na zava-boahary rehetra, hita maso ary tsy hita maso; miaraka amin'ny vatana rehetra, na mineraly, legioma, biby na selestialy ny vatana, na fikambanana ara-politika, indostrialy na fanabeazana. Ny fiovana dia ny vatana; izay tsy miova, raha mitazona ilay vatana tsy miova mifandray aminy, dia ny fanahy.
Izay tian'olombelona ho fantatra tsy dia betsaka loatra ny isan'ny isan-karazany sy ny fanahy; Tiany hahafantatra hoe inona ny fanahin'olombelona. Ny ain’olombelona dia tsy ny saina. Tsy mety maty ny saina. Ny fanahy maha olona dia tsy mety maty, na dia mety lasa tsy mety maty aza. Ny ampahany amin'ny saina dia mifandray amin'ny fanahy maha olona na midina amin'ny vatan'olombelona; ary izany dia antsoina hoe incarnation na réincarnation, na dia tsy marina ilay teny. Raha ny fanahin'olombelona dia tsy manolotra fanoherana be loatra ny saina, ary raha mahomby ny saina amin'ny tanjon'ny fahatongavana ho nofo, dia mampiakatra ny ain'olombelona avy amin'ny toetran'ny fanahy mety maty ka ho an'ny tsy mety maty. Ary ny fanahy mety maty dia lasa tsy mety maty — saina. Ny Kristianisma, ary indrindra ny fotopampianaran'ny fanavotana azo isafidianana, miorina amin'ity tranga ity.
Amin'ny fiheverana manokana sy voafetra ny fanahin'ny olona dia ny endrika ethereal sy tsy azo tsapain-tanana, ny wraith na matoatoa an'ny vatana vatana, izay mitazona ny endrika sy ny endrik'ilay vatana vatana tsy miova lalandava ary miaro azy ireo tsy mivaona. Saingy ny ain'olombelona dia mihoatra an'izany; fa ny toetrany. Ny fanahy maha-olona na ny toetra maha-olona dia olona mahafinaritra, fikambanana midadasika, izay atambatra ho tanjona kendrena, solontena avy amin'ny baiko rehetra nidina. Ny toetra na ny fanahy maha-olona dia mitambatra ary tafiditra ao anatiny sy anatiny ary ny taovany, ary mifehy sy mampifanaraka ny asany ara-batana sy ara-tsaina, ary mitahiry traikefa sy fitadidiana mandritra ny vanim-potoana misy azy. Saingy raha tsy natsangana avy amin'ny toetran'ny olombelona mety maty ny fanahy maha-olombelona - raha tsy tonga saina izany, dia maty io fanahy io na toetrany. Ny fitomboan'ny fanahy ho tonga saina dia tsy maintsy atao alohan'ny fahafatesana. Ny lasa lasa saina dia midika fa ny olona iray dia mahalala ny maha-izy azy irery ary tsy ankoatry ny vatana ara-batana sy ny fahatsapana ivelany sy anatiny. Miaraka amin'ny fahafatesan'ny toetran'ny olona na ny fanahin'ny olona dia navahana ilay fanahy. Niverina tamin'ny baikon'ny fanahy nidina avy any aminy izy ireo, mba hidirany indray amin'ny fitambaran'ny fanahy olombelona. Rehefa maty ny fanahinny olombelona dia tsy voatery sy tsy very matetika. Misy izany izay tsy maty rehefa rava ny vatany sy ny endriny matoatoa. Ny fanahy tsy mety maty dia ny mikraoba tsy hita maso, ny mikra ny toetra, izay antsoina hoe toetra vaovao na fanahy maha-olona ary manodidina izay namboarina vatana ara-batana vaovao. Izay miantso ny hozatry ny toetra na fanahy dia ny saina, rehefa vonona izany saina izany na niomana ho tonga nofo. Ny fanarenana indray ny maha-olombelona ny fototry ny fitsanganana amin'ny maty.
Mba hahalalanao ny karazan'olona rehetra dia mila famakafakana sy fahalalana feno ny siansa, ao anatin'izany ny simia, ny biolojia ary ny toe-batana. Avy eo dia ilaina ny miala amin'ny tsy fitovian-kevitra izay tiantsika antsoina hoe metafizika. Io teny io dia tokony hijanona ho rafitra rafi-pisainana araka ny marina sy azo itokisana amin'ny matematika. Voafaoka amin'ny rafitra toy izany sy ny zava-misy amin'ny siansa, hanana psikolojia tena izy isika, siansa fanahy. Rehefa tian'ny olona izany dia ho azony izany.